Maalinta: Meey 13, 2020
Wadahadalka ku saabsan Mashruuca Masjidka oo sii socda
Marka loo eego wararkii ugu dambeeyay ee qaybta wararka Sivas, CHP Sivas ku xigeenka Ulaş Karasu; Wuxuu sheegay inaan loo baahneyn in masaajid laga dhiso barxadda magaalada. Go'aanka Joojinta Ciyaarta Sivas [More ...]
Dhoofinta maaskaro dib loo isticmaali karo ayaa dhaqdhaqaaqa u keeni doonta waaxda dharka
Gudoomiyaha UTİB Pınar Taşdelen Engin ayaa yiri, “Siideynta mashiinka maareynta dib loo isticmaali karo ma ahan oo keliya inay dabooli doonto baahida weyn ee adduunka, laakiin sidoo kale waxay dhaqaaqi doontaa warshadaha dharka. Pınar Taşdelen Engin, “Isticmaal [More ...]
Ogeysiis ku saabsan Nidaamyada iyo Mabaadiida la raaco ee Suuqyada Suuqa
Waraaqda ka soo baxday Wasaaradda Arimaha Gudaha; In kasta oo ay sii wadayso hawlaheedii illaa 11.05.2020, waxa intaa u dheer xeerarka ay go’aamisay qaanuunka No. 6331 ee Caafimaadka iyo Amniga Shaqada iyo shuruucda la xidhiidha; Qiimayn ay la sameyso Wasaaradda Ganacsiga [More ...]
Cudurka coronavirus ee ka dhacey Wuhan, Shiinaha oo ku faafay adduunka oo dhan, wuxuu saameeyey qaybo badan. Fayraska cudurka wadnaha ayaa ku soo ifbaxay Shiinaha oo si dhakhso leh ugu faafay dalal kale si uu u muujiyo saamaynta uu ku leeyahay qaybo badan. [More ...]
DHMI, oo ka mid ah guulihii Heshiiska Wadajirka Wadajirka ah ee Shanaad ee Gaadiidka Sarkaalka-Sen, mushaarka saacadaha dheeraadka ah waa la labanlaabmay. Afartii bilood ee mushaharka dheeraadka ah ee muddada 5 ayaa lagu shubay xisaabaadka kororka safarka ah. [More ...]
Intii lagu guda jiray geeddi-socodka faafa ee 'Covid-19,' kaas oo saameeya adduunka oo dhan, Madaarka Istanbul wuxuu sii wadaa ka hortaggiisa iyo dayactirka qorsheysan 7/24. Albaabka Turkiga ee dunida, iyo weliba sanadkii ugu horreeyay ee dunida oo dhan HUBER [More ...]
Ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo koleejyada doonaya inay barasho barasho ku sameeyaan Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş (KARDEMİR) waxay sameeyeen bayaan ku saabsan layliyo xagaaga xagaaga ee la qorsheeyay inta ay gaarsiisan yihiin wax soo saarka iyo maareynta internship. kana yimid Kardemir [More ...]
Dhismaha Ditaş iyo Dhismaha Wadada Tareenka
Duqa magaalada Niğde Emrah Özdemir ayaa ku dhawaaqay in la bilaabay howlihii isku xirka Ditaş Junction iyo marinka tareenka. Jidadka 'Ditaş Junction, oo muhiimad weyn ugu leh Ni hasde, wuxuu leeyahay shilal badan waana mid ka mid ah nabarradii dhiig-baxa ee Niğde. [More ...]
Soo-saareyaasha warshadaha waxay ku dhegan yihiin Qiimaha Sare ee Tamarta
Gudoomiyaha Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (BCCI) Gudoomiyaha Ibrahim Burkay, wuxuu sheegay in Turkey ay ka takhalusi doonaan dhibaatooyinka ay weheliso weerar xoog leh oo dhanka wax soo saarka ah, “si kastaba ha noqotee, waxay ku dhegan tahay garabka warshadeena waa qiimaha sare ee tamarta. YEKDEM bilowgii [More ...]
Taxi iyo Taxi Stations Waxaa Fududeeyay Alanya
In kasta oo ay degmada Alanya sii wadayso dagaalka ay kula jirto faafitaanka COVID-19 ee aaggaga dhan, xarumaha taksiyada iyo tagaasida ee ka hawlgala Alanya dhamaantood waxaa buriyay kooxaha Agaasinka Ilaalinta Deegaanka iyo Xakameynta. Degmada Alanya, waxaa laga fuliyay dhammaan degmada [More ...]
Faahfaahinta Wareegtada Nidaamka Caadiga ah ee Koontaroolka Hoteellada
Faahfaahinta wareegtada cinwaankeedu yahay "Geeddi socodka Nidaamka Caadiga ah ee Koontaroolka Goobaha Degaanka" oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa la shaaciyey. Sida la ogsoon yahay, cudurka faafa ee “New Coronary Virus (COVID-19)”, oo lagu daro baaxadda “Faafa” Ururka Caafimaadka Adduunka, [More ...]
Tilmaamaha Cabbirka Cudurka Fududeynta ee Caafimaadka Waxaa daabacay Qeybta
Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, Agaasinka Guud ee Caafimaadka Shaqada iyo Amniga, baaxadda lagula dagaallamayo noocyada cusub ee coronavirus, oo leh timo-jaraha, gogosha, hoolka qurxinta, adeegyada hoyga iyo gadiidka dadweynaha ee dhexmara. [More ...]
Markaad gaartid dooxooyinkaas, oo ah gobolka ugu wanaagsan ee aad ka daawan kartaan panorama-ka caanka ah ee Dahabka Dahabka ah; Kafee, oo loogu magac daray qoraaga caanka ah ee Faransiiska Pierre Loti, ayaa la gaadhay. Nin runti jecel Istanbul oo muddo dheer ku noolaa Istanbul [More ...]
Muddo kahor ayaa la hindisay. Qandaraaska loogu talagalay tareenka Izmit Akçaray ayaa ugu dambeyntii la soo gabagabeeyey. [More ...]
Sarkaalka Saldhigga Ka Fasaxay Magaalada London Qabsashadiisa iyo Waxa Ku Dhinta Coronavirus
Waxaa la shaaciyey in shaqaale ka shaqeeya xarunta tareenka ee London, caasimada Ingiriiska, uu qabtay Covid-19 ka dib markii rakaab uu ku qayliyay, "Waxaan qabaa coronavirus," oo ku tufo. Sida ay ku waramayaan wararka BBC-da ee Turkiga; Ururka Gaadiidka TSSA [More ...]
Jadwalka Jadwalka Tareenka ee Edirne Istanbul iyo Qiimaha Tigidhada 2020
Jadwalka Jadwalka Tareenka ee Edirne Istanbul iyo Qiimaha Tigidhada; TCDD Taşımacılık A.Ş. by Halkalı Waxaa jira diyaarad celcelis ah oo duulimaad ah oo ah 1 inta u dhaxaysa Kapıkule. Halkalı Wakhtiga celceliska safarka ee u dhexeeya Kapıkule 4 [More ...]
In kasta oo dhammaan diidmada iyo hubanti la’aanta ay keento fayraska corona (COVID-19) adduunka oo dhan, ASELSAN waxay sii wadaa hawlaheeda iyada oo ku jirta qaab dhismeedka taxaddarka iyada oo aan wax carqalad ah ku keenin soosaarka iyo silsiladda sahayda. Warshaddii ASELSAN ee "Hassa Optik" ee Sivas [More ...]
Awoodda Baku Tbilisi Wadada Tareenka Waddada ayaa Kordhay
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Adil Karaismailoğlu, Covidien-19 oo ah cabirrada ganacsiga shisheeye ayaa kordhay baahida loo qabo khadka tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars (BTK) 3 kun 500 oo tan oo awoodo dheeraad ah ayaa u saamaxaya in la kordhiyo nidaamka gaadiidka haamaha Turkiga ee Georgia. [More ...]
Hadiyadaha lugeeya ee lugta ah ee Izmit had iyo jeer waa la nadiifiyaa
Isgoysyada lugeynaya ayaa muhiimad weyn u leh gaadiid aamin ah oo muwaadiniinta, gaar ahaan nolosha magaalada. Muwaadiniinta waayeelka iyo naafada ah guud ahaan waxay u isticmaalaan wiishashka dusha sare ee marinnada. Jardiinooyinka Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli iyo Waaxda Beeraha [More ...]
Waxaa la sheegay in 12 matoor loo keenay in loo adeegsado AKINCI Offensive Unial Veh Vehicle (TİHA), kaas oo loogu talagalay injineerada difaaca ee Baykar isla markaana howshiisa wax soo saarkoodu uu sii socdo. "Warshadaha Qaranka" ee ka hawl gala Ukraine [More ...]
15 kun oo shirkado cusub ayaa laga furay rubuc qarnigii hore magaalada Istanbul, 7 kun oo shirkadood ayaa la xiray
Ee lagu qabtay Istanbul, halkaas oo boqolkiiba 43 ka mid ah dhoofinta Turkiga, dhoofinta hoos 36,9 boqolkiiba April marka loo eego sanadkii hore. In kasta oo dhoofinta ay hoos u dhacday wershadaha diyaarka u ah dharka iyo dharka, waxay ku kordhay waaxda warshadaha difaaca iyo duulista. ugu [More ...]
'Askarta yar-yar' ee Weftiyo Weyn Madowga Madowga ah iyo Aselsan Nano UAV
ASELSAN waxay markii ugu horreysay shaaca ka qaadday qalabkeedii caqliga badnaa ee Nano Unmanned Aerial Vehicle (Nano-UAV) ee TEKNOFEST'19 in muddo ah. Waxaa lagu samayn karaa meelo furan oo xiran si loo helo daahfurka, la-socoshada iyo ujeeddooyinka sirdoonka [More ...]
İmamoğlu wuxuu Sameeyay Iftikigii Koowaad ee Wadajirka oo ay la shaqeeyaan shaqaalaha Dhismaha mitrooga
Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu wuu awoodi waayey inuu hirgeliyo afurka dhaqan ahaan loogu sameeyay guryaha muwaadiniinta sababo la xiriira hannaanka faafa ee sanadkan. İmamoğlu, oo sameeyay bishii ugu horreeyay ee sanadka ee shaqaalaha 'Linemraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Line', wuxuu yiri, "Bisha Ramadaan, caadiyan [More ...]
Izmiriisiyaanka kama aysan reebin cabirka gaadiidka
Marka loo eego macluumaadka Agaasinka Guud ee Degmooyinka Izmir Metropolitan ESHOT, qiimaha baska ee labada maalmood ee ugu horreeya wuxuu kordhay celcelis ahaan 11 boqolkiiba usbuuca Maajo 14 marka loo eego isla muddadaas toddobaadkii hore. Miiska waa mid lagu qanco [More ...]
Maalinta dhalashada Florence Nightingale, oo ah aasaasihii xirfad kalkaalinta caafimaadka, ayaa loo arkaa maalinta kalkaaliyayaasha adduunka ee 12-ka May, iyo usbuuca maalintaa bilaabmaya ayaa loo dabaaldegaa sidii Isbuuca Kalkaaliyaha Caafimaadka adduunka oo dhan. Wuxuu ku dhashay Istanbul [More ...]
Adeegyada Takbiirta tunnel-ka Taksim tunnel ayaa bilaabmay
Warshadaha gudaha ee Karsan Otomotiv ee dalka Turkiga, faafitaanka cudurka corona, waxay kuxirantahay amarrada macaamiisha oo ay ugu wacan tahay dhammaan howlihii ka jiray warshadda Hasanağa Abaabulka Aasaasiga ah ee Juun 8 illaa 14 toddobaad. [More ...]